Kunxuswa umphakathi waseMlazi ngomkhankaso wamaRabi – Sivubela intuthuko Newspaper
Umphakathi unxuswa uvikele izilwane ezifana namakati nezinja
By admin	 Last updated Aug 21, 2020
Ngaphansi kwephiko lwezeMvelo kanye nezeMpilo kumasipala weTheku,ngokubambisana noMnyango wezoLimo kanye nezokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya usumemezele ukuthi uqale umkhankaso wokuvikela isifo samaRabi ezilwaneni. Ngokwesitatimende esithunyelwe abezindaba sithi lomkhankaso uqalwe endaweni yaseMlazi namaphethelo.
Isitatimede simi kanje, inhloso yomkhankaso wokuqwashisa ngesifo samarabi ukwazisa umphakathi ngokubaluleka kokuvikela izilwane ezifana namakati kanye nezinja ukuba zithole umjovo wokuvikela ukuthi zingangenwa isifo samaRabi, njengoba kutholakale ukuthi lendawo yaseMlazi isivele isengcupheni yalesisifo.
Izakhamizi ziyanxuswa ukuthi zihambise izinja namakati ezitobhini eziseduze lapho ziyothola khona umjovo wamaRabi mahhala, futhi kumele ziphathe izitifiketi zomjovo ongaphambili kodwa futhi uma zingekho izitifiketi ayikho inkinga ngoba kuyokhishwa ezintsha.
Ezinye izikhungo okungayiswa kuzo izilwane kungaba kwaSPCA oseKloof kanye naseManzimtoti. Uhlelo lokujovela amaRabi luqhutshwa kulezigceme zaselokishini laseMlazi namaphethelo ezingezansi ngesinsuku ezahlukene:
kwaZ; (KwaMuzi Tavern (Park) 19/08/2020-Z (KwaSayitsheni Shops) 19/08/2020- Z (KwaNdosi) – Ezikrebheni 20/08/2020 -Z (Mlambo Tuckshop) Malusi Cele Road 20/08/2020 – Y (Ezimbokodweni Primary School) 21/08/2020-Y (Faith Mission Church) – Eshashalazini 21/08/2020 – Malukazi (Emakhehleni) 07/09/2020
Malukazi (Second Venue to be confirmed) 07/09/2020 – U Esipingo Primary Grounds 07/09/2020 – U (Council’s Office) 07/09/2020 – Q (B.P Garage) 08/09/2020 -P (Sizwakele Primary School) 08/09/2020 -Q (Ezitolo) 08/09/2020 -P (Ezitolo) 08/09/2020 .
Kanti ukwazi kabanzi mayelanana nemininingwane yaloluhlelo , abanikazi bezilwane bangafonela kulenombolo: 031 902 6253/031 3113555
BASENKINGENI ABE-BUCS ABAPHULE IMIGOMO